Espana: Polisy “Niarahaba” Ireo Mpanao Hetsika 15M Tao Paris · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Oktobra 2011 8:20 GMT
Vakio amin'ny teny English, Deutsch, Français, Italiano, Português, Español
Ilay antsoina hoe “diaben'ny fahasorenana” [es], nivondronan'ireo tarika telo (Meseta, Toulouse and Mediterranean), dia niainga tao Madrid, Barcelona sy Toulouse ka Bruxelles no tanjon-dry zareo farany. Ny tanjona dia ny hanely ny fitakiana sy hafatra entin'ny hetsika 15M [15M no anarana nomena ny hetsika tao Espana satria ny 15 May no nanombohany) ho any amin'ireo mpitondra firenena ao amin'ny Fiombonambe Eraopeana. Vantany vao voadingan-dry zareo ny sisintany Espaniola, nahita fandraisana tsara avy amin'ny mponin'ireo tanana nizorany ireo tarika tsirairay. Indraindray, gaga ireo mponina sy mpandalo, saingy naneho fiombonam-po ihany ny ankamaroany.
Ireo diaben'ny fahasorenana dia te-hanohina ny fo amam-panahy izay hitondra mankamin'ny hetsika hahafahana manatra n y fahatsiarovan-tena, firaisankina ary fifankatiavana. Ireny hevitra sy fihetsehampo ireny dia niteraka tetikasa sosialy afaka, tsy hoe fotsiny mampiray firenena iray manontolo, fa izao tontolo izao mihitsy: izay no tianay hatao. (http://marchabruselasmediterranea.blogspot.com) [es]
@marcheparis: Ny diaben'ny hetsika 15-M ho any Bruxelles dia ravan'ny daroky ny polisy tao Paris. #marchabruselas #walktobrussels bit.ly/q6VQ13
Nivoaka tamin'ny famoahana gazety tao amin'ny tranonkalan'dry zareo @acampadasol [es] ireo 80, fitambaran'ny isan'ireo voasambotra, izay miparitaka any amin'ireo tobin'ny mpatandro filaminana samihafa manerana ny tanàna:
Tamin'ny farany, tsy izany no nitranga ary dia lasa toy ny tapiham-baovao monja ny vaovao momba ireo Espaniola 80 voatanan'ny [es] manampahefana Frantsay ho an'ireo famoaham-baovao sasany, raha ny sasany kosa miezaka ny tsy hiresaka mikasika azy io tsotra izao.
@spainrevolt: Maherin'ny 100 ireo Espaniola voatana any Frantsa ary tsy misy mitatitra an'izany. bit.ly/nuKGd1 #elpais, mila manome tànana anareo ve izahay amin'ny famoahana ny gazety rahampitso?
Olivier García, mpanolotsaina amin'ny lafiny lalàna an'ireo voasambotra, dia milaza ilay fanapahan-kevitra hitondràna azy ireo ho eo anoloan'ny mpitsara ho “tsy mifanentana” [es], ary niteny fa “tsy mbola nisy toa azy” raha n y marina io fepetra noraisin'ny mpampanoa lalàn'ny distrika io.